About eTurboNews | eTurboNews | Vaovao momba ny dia
Home » About eTurboNews
Ny asa nanirahana ny eTurboNews Ny vondrona dia tokony hanome serivisy vaovao B2B mahomby amin'ny vidiny, solontenan'ny PR ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany ary fizarana vaovao amin'ny alàlan'ny fitehirizam-bokin'ny mailaka sy tranokala, tranokala fikarohana ary fanaraha-maso ny mpamaky.
eTurboNews, ny serivisy vaovaontsika, izay foiben'ny tatitra nosoratan'ny ekipa manerantany iray mpamoaka lahatsoratra, mpanoratra, mpandinika vahiny ary mpanao gazety indraindray, mifantoka amin'ny hetsika, vaovaon'ny orinasa, fironana amin'ny tsena, zotra sy serivisy vaovao, fivoarana politika sy mpanao lalàna. mifandraika amin'ny fizahan-tany, fitaterana ary fizahan-tany, ary ireo olana mifandraika amin'ny andraikitry ny fizahan-tany amin'ny ady amin'ny fahantrana, ary ny andraikitry ny indostria amin'ny tontolo iainana sy ny zon'olombelona.
Ny atin'ny tatitra dia fehezina amin'ny famoahana lahatsoratra araka ny soatoavim-baovao, ny lanjany ary ny maha-izy azy, voaaro ny zon'ny mpamorona, ary tsy miankina amin'ny doka rehetra na sponsorship entina.
Ny tohan'ny mpamaky dia lisitra fandefasana mailaka mpidina an-tsitrapo izay mandeha amin'ny 255,000+ eran'izao tontolo izao, indrindra ny matihanina amin'ny varotra sy ny mpanao gazety momba ny fizahan-tany ary ny fizahan-tany.
eTurboNews lahatsoratra fanontana dia azo alaina ho an'ny syndication ary havoaka indray amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao hafa amin'ny teny mahazatra.
eTurboNews Breaking News dia faneva marika hamantarana ny fifandraisana iray tsy misy hatak'andro momba ny olona iray na ny vaovao maika maika haparitaka arak'izay ilaina.
eTurboNews Ny fifanakalozan-kevitra dia takelaka hafatra ho an'ny vondrom-piarahamonina mifototra amin'ny tranonkala hahazoana valiny, hevitra ary fanehoan-kevitra avy amin'ny mpamaky.
TravelMarketingNetwork dia consultancy fifandraisam-bahoaka mifantoka manokana amin'ny filan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Manome serivisy ny vahaolana PR namboarina sy toro-hevitra momba ny varotra sy ny marika ho an'ny orinasa lehibe na orinasa kely sy salantsalany mirotsaka amin'ny raharaham-barotra, fitaterana na fizahantany mifandraika amin'izany izahay.
eTurboNews dia raharaham-barotra amin'ny asa aman-draharaha sy serivisy ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny fanapariahana ny vaovao an-tserasera sy ny vaovao mifandraika amin'ny varotra fitetezam-paritra manerantany, miaraka amin'ny PR mpivarotra fizahan-tany manokana sy serivisy marketing ary fiaraha-miombon'antoka amin'ireo rafitra manerantany mifandraika amin'ny fizahan-tany sy fizahantany, ao anatin'izany ny UNWTO, WTTC ary Ny fiaraha-miasa amin'ny ICTP sy ny haino aman-jery miaraka amin'ny foara fitetezana dia anisany WTM London sy IMEX-Frankfurt.
Mode de Operation
Ny fomba fiasa dia ny fanaparitahana ny tatitra momba ny vaovao sy ny hafatra ara-barotra amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny lisitry ny mpivarotra dia sy ny mpamaky haino aman-jery ary manangona ireo hafatra ho an'ny retrieval sy referansa amin'ny tranokala, ary hanome vahaolana PR sy vahaolana ara-barotra ho an'ny orinasa fitsangatsanganana kely sy salantsalany.
eTurboNews mahazo ny vola azony avy amin'ny fandoavam-bola amin'ny fizarana, dokam-barotra amin'ny banner, dokam-barotra ary koa avy amin'ny fanohanana ny mpanohana izay mety amin'ny sandam-bola na amin'ny fomba tsara indrindra (barter). eTurboNews mahazo vola ihany koa amin'ny famolavolana vahaolana manokana momba ny PR sy marketing amin'ny alalany eTurbo Fifandraisana division.
Eo amin'ny sehatry ny fizarana vaovao momba ny varotra dia eTurboNews manome lanja fanampiny amin'ny fahatongavany eo amin'izao tontolo izao eo ho eo, mikendry ireo matihanina mpivarotra dia sy mpanao haino aman-jery (mpanao gazety sy gazety, gazety, fampielezam-peo ary serivisy an-tserasera), amin'ny lisitr'ireo fizarana mailaka mihoatra ny ampahefatry ny mpanjifa opt-in manerantany.
eTurboNews koa manome lanja ny fizarana ny vaovao momba ny fivarotana amin'ny alàlan'ny fiantsoana tambajotran'ireo solontena, mpanao gazety ary mpandalina eto an-toerana hanome tatitra vaovao mifantoka mifandraika amin'ny varotra dia lavitra amin'ny hetsika haingana kokoa noho ny haino aman-jery ankapobeny.
eTurboNews manampy lanja ihany koa amin'ny alàlan'ny fampiantranoana dinika fifanakalozan-kevitra sy weblog mifandraika amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany izay manome fifandraisana, fampahalalana ary hevitra avy amin'ny mpamaky.
Famoahana e-news eran-tany tranainy indrindra manerantany. Niorina tamin'ny taona 1999, fanontana mailaka isan'andro hatramin'ny 2001.
Mpamaky: 230,000 matihanina amin'ny indostrian'ny dia, mpanao gazety 17,000, mpanjifa antonony 2.03 tapitrisa
Fahazoana geografika: 30% Amerika Avaratra, 30% any Eropa, matanjaka any Afrika, Faritra Golfa & Moyen Orient, Afovoany, Atsinanana sy Azia atsimo, Aostralia sy Pasifika. Voafetra any Amerika atsimo, Sina.
TravelWireNews: Votoatin'ny sehatra iraisam-pirenena tena misy ifandraisany amin'ny dia, fizahan-tany ary zon'olombelona. 200+ lahatsoratra isan'andro.
eTurboNews: Manam-pahaizana momba ny indostrialy fitsangatsanganana maneran-tany ao anatin'izany ny fivarotana varotra, MICE, PR, fiaramanidina, fandraisana vahiny, fikambanana, governemanta ary haino aman-jery.1-3 lahatsoratra manasongadina, lahatsoratra vaovao 10-25 isan'andro.
eTN.travel: Ireo matihanina amin'ny indostrian'ny dia manerana izao tontolo izao: ny ankamaroan'ny mpamaky dia mahita ny etn.travel amin'ny alàlan'ny rohy sy fiaraha-miasa.
WorldTourismWire: Mpitondra ambony ao amin'ny UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, PATA, IIPT, IGLTA ary fikambanana hafa. Tale jeneralin'ny orinasa lehibe sy lehiben'ny birao fizahantany ary ny CVB. 1-3 lahatsoratra isan-kerinandro.
www.mitson.travel: Ireo mpamaky kendrena dia mpividy sy mpivarotra ao amin'ny Fivondronan'ny Indostrian'ny Fihaonana sy Fandrisihana.
www.aviation.travel: Vaovao momba ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary fandaminana eo amin'ny tontolon'ny fiaramanidina ao anatin'izany ny fanavaozana ireo olona mitantana ity indostria ity.
HawaiiTourismAssociation.com: Bilaogy fizahan-tany momba an'i Hawaii.
hawaiinews.online Vaovao momba an'i Hawaii ho an'ny mpitsidika sy ny mponina
Travelindustrydeals: Mpiasa fitsangatsanganana liana te hianatra momba ny fitaovana fivarotana sy ny tolotra manokana.10-20 manolotra herinandro.
divay.travel: Portalna misy divay, gourmet, rendrarendra ary fitsangatsanganana
Fampiasana.org.travel: Varotra sy mpitsangatsangana liana amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany LGBT.
Forim Mediaterelease.net: Mpanao gazety liana amin'ny fanavaozana ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Famoahana famoahana 5-10 isan'andro.
eTurboNews.de: Matihanina amin'ny dia amin'ny fiteny alemana. Lahatsoratra 2-5 isan'andro.
Worldtourismevents: Lisitry ny hetsika sy ny fampiroboroboana.
Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany (ICTP)
Gazety TravelWireNews TravelWireNews: Fanavaozana isaky ny adiny 3 mahatratra 72,000 ny isan'ny mpanjifa
eTN Vaovao farany momba ny dia lavitra Fanavaozana isan'ora (na rehefa miseho ny vaovao momba ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany: mpanjifa 45,200
eTN Daily: Gazety isan'andro ho an'ny Indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany: 151,200 ny mpanjifa
eTN isan-kerinandro: Gazety isan-kerinandro ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany: mpanjifa 12,100 XNUMX
WorldTourismWire: Gazety ho an'ny Mpitondra fizahantany, minisitry ny fizahantany ary lehiben'ny fikambanana ary CEO an'ny orinasa lehibe: mpanjifa 7,100 XNUMX
ForImmediaterelease: Fanavaozana isan'andro ho an'ny mpanao gazety liana amin'ny vaovaon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany: mpanjifa 17,000
Fivoriana.travel: Fanavaozana isan-kerinandro na mihoatra ho an'ny mpividy sy ny mpivarotra ao amin'ny indostrian'ny MICE, mpamaky 12,100 XNUMX.
Aviation.travel: Fanavaozana isan-kerinandro na mihoatra ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary momba ny olana mifandraika amin'ny tontolon'ny fiaramanidina.
Gaytourism: Vaovao farany ho an'ny mpandeha LGBT sy ny indostrian'ny dia: mpamaky 6,800
Gazety divay.travel isan-kerinandrompamaky r hatramin'ny 1100+ Vaovao farany momba ny divay, Gourmet ary ny fizahan-tany momba ny fizahantany sy fizahan-tany: mpamaky 1,100 XNUMX
Hawaiinews.online: Fanatsarana ny fizahan-tany any Hawaii sy Hawaii: mpamaky 5,600
Travelindustrydeals indroa isan-kerinandro fanavaozana ho an'ny 68,000+ agents agents worldwird (hafatra momba ny varotra)
eTurboNews Fanontana amin'ny fiteny alemanina: Indroa isan-kerinandro mahatratra mpanjifa 8,001
Fampahalalana momba ny media sosialy sy ny vavahady:
Fampidirana Google News: eTurboNews - Forim Mediaterelease
Hindustan Times, Business-Travel, Fanavaozana ny MICE, mpanatanteraka fiaramanidina, TravelTalkMedia ary maro hafa
Facebook: eTurboNews - Etn.travel - TravelWireNews - worldtourismevents - ICTP - gaytourismusa - hawaiinews
Tambajotra mpiara-miasa ao anatin'izany ny EIN, CNN Task Group, Aviation Group, Hindustan Times sy ny hafa.
Twitter: eTurboNews - CNN_Newstrend - WorldTourismNow - HawaiiTalk - Mpizahantany - TravelAndWines - eTurboNews amin'ny teny alemà - GAYTOURISME
Ahoana ny fandefasana ny famotsorana anao?
(safidy malalaka sy maimaim-poana)
Tsindrio eto raha hiroso